1BR 14min(4ppl)NYC/1 Car/5min America Dream Mall! - I-Airbnb
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Jose & Jessy
U-Jose & Jessy Ungumbungazi ovelele
I-PREFNCE: IZINGANE IMINYAKA ESI-8 NAngaphezulu!
Okwamanje singabasingathi Abakhulu ku-1BR Apt Ekhona eNxaxanxathela efanayo. Womabili amayunithi azoba yiminyango emi-2 ukusuka kwelinye futhi iyunithi ngayinye ilala 5. Lokhu kulungele amaqembu amancane namaphathi amakhulu ahamba ndawonye. Kuyi-1BR w/isikhala esanele kanye nokuhlobisa kwesimanje. Zonke izinto ezisetshenziswayo ezibuyekeziwe kanye nama-Smart TV ane-Wifi. Igumbi lokuhlala kanye negumbi lokulala linama-AC. Iza w/ 1 indawo yokupaka esizeni. Siyimizuzu eyi-15 ukusuka e-NYC futhi siseduze nayo yonke imigwaqo emikhulu kanye nemizuzu eyi-8 kuye kweyi-10 ukusuka ku-Met Life.
Sinezindlu ezi-2 ezihlukene kanye ne-Superhost ku-apt yethu yokuqala. ngakho-ke sicela ubheke zonke izinhlu zamafulethi ukuze zitholakale. Ukubheka okunye ukufakwa kuhlu, mane uchofoze esithombeni sami kwesokudla, futhi ngezansi kwesokunxele sekhasi elilandelayo, kukhona isixhumanisi ("bona zonke izinhlu"). Lokhu kuhle uma kuza ngamaqembu amakhulu.
Siwumphakathi ohlukahlukene onezinhlobonhlobo zokudla. Sinezindawo ezimbalwa eziyintandokazi esingazitusa kakhulu njenge-Casa Di Napoli yesiNtaliyane sangempela sangempela (Imali Kuphela), i-Mi Bandera enye ye-Churasscos nesoso ye-Chimi Churri ehamba phambili. Sinezitolo ezinkulu ezimbili zasendaweni okuyiShop Rite ne-Wal-Mart, okuyimizuzu emi-5 kude ukuze uthole isidlo sasendaweni. Siyimizuzu eyi-10 noma ngaphansi ukusuka e-American Dream Mall entsha ehlinzeka ngokukhangayo okuningi nokuthenga okudayisa.
Igumbi lethu lesimanjemanje, elizimele ngokuphelele, eli-1 lokulala/igumbi lokugezela elilodwa liyimizuzu ukusuka eNew York Times Square kanye naseMeadowlands Sports Arena/Concert Complex. Ifulethi linesivinini esikhulu se-Cable/Wi-Fi Internet kanye nelondolo endaweni evamile ngenkokhelo.
"Ikhishi lokudlela" linohhavini/isitofu, imicrowave, umenzi wekhofi, isiqandisi/isiqandisi esigcwele usayizi, nazo zonke izinto zokupheka, ingilazi nezitsha ongazidinga. Ekamelweni lokuphumula sine-T.V. enkulu, I-Queen Size Serta Sofa Bed kanye nesiteshi sokusebenza. Sikunikeza wonke amashidi, amathawula namalineni. Kukhona amaphansi okhuni oluqinile, i-air-conditioner/heater, njll., nezindlu zangasese ezicwebezelayo ezihlanzekile!
Sihlinzeka ngokugeza umzimba, i-shampoo, i-conditioner, iphepha lasendlini yangasese namathawula ephepha. Uma udinga into ongayiboni itholakala kalula, ngicela ubuze! Uxolo, sicela ukuthi kungabikho ukubhema ngaphakathi kwefulethi futhi kungabikho izilwane ezifuywayo. Sinevulandi elihle elingaphandle egcekeni lethu elinetafula/indawo yepikiniki ezinyangeni ezifudumele ukuze sidle noma siziphumulele ngaphandle.
4.92 · 150 okushiwo abanye
I-apt iku-cul-de-sac. Ibhulokhi enobungane kakhulu futhi ethule. Ukufinyelela Kalula kuyo yonke into. Sikumizuzu emi-5 ukusuka e-Secaucus eneplaza egcwele izindawo zokudlela nezitolo. Izindawo zokudlela eziseduze zifaka i-Pizza, isiShayina, i-Cuban, i-Thai, i-Peruvian, ne-Mexican futhi eziningi ziletha uma ukhathele kakhulu ukuphuma ngemva kosuku olude edolobheni. Sinesitolo esikhulu sendawo esiqhele ngamaminithi angu-5 kanye nenani lezindawo zokudlela eziyiqiniso zasendaweni. Ngaphezulu kwebhuloho ngaphansi kwemizuzu emi-5 ungakwazi ukufinyelela e-Secaucus Plaza enezitolo eziningi, izindawo zokudlela kanye nethiyetha yethu ye-movie esiyintandokazi. Sizoba kude nemizuzu eyi-10 ukusuka kwenye yezitolo ezinkulu ezinezinsiza ezimangalisayo. Bheka lento
Ibungazwe ngu-Jose & Jessy
Kusukela ekubuyekezweni kwami ungabona ukuthi ngisabela ngokwedlulele futhi ngiyatholakala uma ngidingeka nganoma yiziphi izinkinga/ukukhathazeka. Sihlala endaweni ngakho sivame ukuba seduze isikhathi esiningi.
UJose & Jessy Ungumbungazi ovelele